तरकारी भन्दा सस्तो शरीर ! वेश्यावृतिमा लाग्नेहरु बढेपछि यहाँ मात्रै २०० रुपैयाँमा बिक्छ शरीर ! - Ektm news
Home›अपराध›तरकारी भन्दा सस्तो शरीर ! वेश्यावृतिमा लाग्नेहरु बढेपछि यहाँ मात्रै २०० रुपैयाँमा बिक्छ शरीर !
यहाँ महिलाहरु करिव एक ग्राहकको लागि २ डलर यानेकि २०० रुपयाँ लिएर पनि आफूसंग यौन सम्पर्क गराउन बाध्य छन् । यति थोरै पैसामा आफ्नो सरिर बेच्नु यिनीहरुको लागि बाध्यता जस्तै बनेको छ ।भारतले यौनकर्मीहरुको लागि छुट्टै रेड लाइट क्षेत्र छुट्याएको छ । त्यस्तै रेड लाइटमा पर्ने कोलकत्ताको सोनागाछीमा यौनकर्मीहरुको कारण निकै परिचित छ । कलकत्ताको यो क्षेत्र बदनाम गल्लिको रुपमा पनि चिनिन्छ । यस क्षेत्रमा महिलाहरुको निकै दयनिया जिन्दगी देखाउने कयौं तश्विरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
अन्य रोजगारीको अवसर नहुनु र बिबिध कारण यस्तो पेसामा बस्न बाध्य पारिनु यिनीहरुको बाध्यता हो । रिपोर्ट अनुसार हरेक बर्ष यहाँ करीब एक हजार महिलाहरु आउँछन् ।
यहाँ रहने महिलाहरुले सानो-सानो कोठामा आफुलाई बेचीरहेका हुन्छन् । फोटो फिचरमा हेर्नुहोस् ति महिलाहरुको सानो कोठा र तिनका अवस्था ।from citydainik.com
थाहापाइ राखाैं : यी महिलाले प्रयाेग गर्नु ...
भारतीय एसएसबीको टिमले फेरी भत्कायो नेपालको सिमानाको ...
काठमाडौंको नासा कलेजमा अध्ययनरत १९ वर्षे छोरीको चरम यातना दिएर बाबुआमाले गरे हत्या !
चेलीबेटी बेच्ने वडाध्यक्षलाई दुई लाख ५० हजार जरिवाना सहित ३७ वर्ष जेल सजाय, यस्तो छ उनले गरेको निकै डरलाग्दो कर्तुत ...
दरबारमार्ग ‘रेप केस’ : बलात्कारमा संलग्न शैलेश कार्की पक्राउ
यौनजन्य क्रियाकलावमा सम्लग्न गराएको आरोपमा होटल सञ्चालिका पक्राउ
बलात्कार कम गर्न प्रहरीको यस्तो योजना
दाद, डण्डीफोर, मुख गन्हाउने, ज्वरो र रुघा खोकिको एउटै अचुक औषधि